KA HORTAGGA IYO XAKAMAYNTA CAYAYAANKA BARADHADA - BARADHADA
Sidee loola tacaali karaa cayayaanka baradhada
Tirada cayayaanka iyo cudurrada baradho waxay u dhigantaa riwaayadeeda. Beeraley kasta oo ka badan hal mar waa inuu ka fikiraa noocyada kala duwan ee waxyeellada dalagyada xididada waxayna helayaan khasaaro weyn oo ah goosashada. Sidaas yaa cuno baradhada, sida loo maareeyo cayayaanka waxyeellada leh iyo sii wadaan inay ka hortagaan weerarkooda - akhri wax dheeraad ah maqaalkan.
Ma taqaanaa? Of noocyo badan oo baradho adduunka, La Bonnotte waa la qiimeeyay, dalkeeda waa jasiiradda Noirmoutier. Tani waa khudradda xididka ugu qaalisan. Kiilo ka mid ah daaweynta noocan oo kale ah ayaa kaa qaadi doona nus kun euro.
Haddii aadan qaadan tallaabooyin, markaa dulin-faaruqinta voracious waxay awoodaan inay nadiifiyaan si loo burburiyo digriiga iyo dushooda. Colorado, ama, sida loogu yeedho, kuwa lamid ah baradho waxay ku hogaamiyaan liistada cayayaanka ugu khatarta badan beerta sababtoo ah rabitaankooda iyo awoodda ay u leeyihiin inay si dhakhso ah u badiyaan. Waxay aad u adag yihiin, waxay la qabsadaan xaaladaha kala duwan ee cimilada iyo kiimikooyinka sunta ah, kuwaas oo ay daweeyaan beerta dhowr jeer sanadkiiba. Intaa waxaa dheer, cayayaanka kuwan oo raadinaya raashin waxay ka gudbi karaan masaafo badan, waxay ku jiri doonaan dhir khafiif ah waxayna ku ururaan dhulka dhulka.
Qoto dheer oo ah mitir nus ah, halkaas oo kuwa lamid ah ee loo yaqaan 'hibernate', xaalado aad u raaxo leh ayaa loo abuuray xilliga qaboobaha. Daboolka barafku uma oggolaanayo inuu barafoobo, hayno diirimaad, ciidana ma qaboojiyo heerkaas. Sidaa darteed, marka dhulku bilaabmaa in ay kululaan guga, cayayaanka toosan iyo kor u kaca. Iyadoo bilawga ah ee kulaylka iyo caleemaha ugu horeeya ee beeraha baradho ah ee kuwa lamid ah, mudada dhalashada bilaabmaa.
Waxaad arki kartaa ukunta jaalaha ah ee caleenta gudaha gudaha caleenta, kaas oo ah dirxiga yar yar ee dhogorta gaduudan uu muuqan doono waqti gaaban.
Ma taqaanaa? Dumarka of Colorado baradho baradho qiyaastii 4 boqol oo ukunta maalin kasta.
Ha sugin ilaa inta ay kooxaha xuubka ah ee dulin-yarku u muuqdaan caleemaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin xitaa marka laga beerto dalagyada xididka. Si loo dhammeeyo, digriiga waxaa lagu daaweeyaa daroogada, "Tyrant", "Maxim" ka dibna kaliya waa lagu aasaa dhulka.
Nidaamkan noocan oo kale ah ayaa la sameeyaa si loo xaqiijiyo abuuritaanka geedo wanaagsan.
Dheeraad ah, sida cawska baradku u korayo, waxay noqoneysaa mid aad u adag in lala dagaallamo laalaabka baradho ee Colorado, maadaama ay cayayaankaasi leeyihiin dhawr degmo oo degan, taas oo ah runta labadaba jiilaalka iyo xagaaga. Dadka qaangaarka ah qaarkood waxay ku qaadan karaan qiyaastii seddex sano oo dhulka ah. Si ay u ilaaliyaan dhalidda, milkiilayaasha meelihii yaryar waa in ay gacanta ku soo ururiyaan jiil cusub oo ka mid ah kuwa lamid ah.
Jardiinooyinka waaweyn ee jikada, tirada cayayaanka ayaa la yareeyn doonaa iyaga oo ku buufinaya baradhada leh diyaargarow sida: Aktely, Iskra, Karbofos, Bitoksibatsillin, Prestige, Aktara
Kuwa ka cabsada isticmaalka sunta cayayaanka, daaweynta bayoolojiga, sida Bowerin, ayaa la heli karaa. Iyadoo weerarrada yaryar ee cayayaanka, waxaad isticmaali kartaa daaweynta dadweynaha ee loo yaqaan 'Colorado beetles'.
Dhamaan cuntooyinka oo dhan waa la heli karaa qof kasta oo gurigiisa ah oo si buuxda aan wax dhib lahayn. Qaar ka mid ah waxay bixiyaan si loo daweeyo sariirta barafka leh ash ashyaada.
Kuwa kale waxay kugula talinayaan inaad diyaariso xal miir ah calendula, urta taas oo ah mid aad u xun cayayaanka la sheegay. Iyadoo lagu saleynayo caqiidooyinkaas, isku day inaad ku beerto dhaqanka daroogada ee u dhexeeya safafka baradhada.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la siiyo daaweyn noocaas ah: "Glow", "Temp", "Dilor", "Marshal", "Colorado", "Sumicidiin", "Tsimbush", "Volaton", "Novador".
Waa muhiim! Dhirbaaxada wakhtiga ah, dabacsanaanta ciidda iyo caleemaha baradhada ayaa caawinaya in la yareeyo tirada dadweynaha Colorado iyo kuwa kale ee waxyeello leh.
Baalalkan aan waxtarka lahayn waxaa ku jira baalal wasakhaysan oo caarad ah, sida walxaha Colorado, waxay u haajireen dhulkeena Maraykanka. Inkastoo ay ku haboontahay cimilada diimeed, haddana maanta ma jirto meel meel ka baxsan dunida oo aan ku noolaan karin baradhada baradho. Xanuunada dadka waaweyn waxay ku nool yihiin dhowr maalmood oo keliya, maareynta inay bixiyaan seddex jiil qaran muddadan. Bakhaarada xiran iyo goobaha beeraha, taranka lo'da ayaa ah mid aan la xakamayn karin, maaddaama meelahaas aan la gaari karin dadka uurka leh ee ku quudiya cayayaankaas.
Tilmaamaha cayayaankaas - Cayayaanka baradhada ayaa ah in aaggooda qaybinta ay yareeyaan heerkulka xilliga jiilaalka ilaa 4 darajo oo ka hooseeya eber.
Iyo haddii bar ah oo aan ogayn sida jiilaalka on waddada, bannaanka u caawiyaan isaga oo leh this, gudbinta dirxiga ee digriiga baradho si loogu keydiyo Maqsin. Waxaa jira, siisay si fudud u kordhay ilaa guga iyo wax beerto mar kale ku dhacaan dhulka.
Qoyaanka ukunta waa adag tahay - Way yaryihiin in aanay suurtagal ahayn in iyaga lagu arko xitaa meelo kala duwan. Dhaqdhaqaaqa muhiimka ah ee dulin-saarkan ku yaala dhirta solanaceous waxaa lagu muujiyey cirridka iyo cuuryaan la'aan, oo ugu dambeyntii u dhinta.
Sababta tani waxay ku jirtaa fiilooyinka caleenta ah ee waxyeellada leh, marinnada laga sameeyay iyaga, taas oo qalkeedu ku xiran yahay.
Natiijada, tayada iyo tirada miraha dalaggu aad ayuu u yareeyaa, digriiga infekshanku waa mid aan ku habooneyn isticmaalka iyo iibinta, iyo duurka u badbaaday ayaa aad u tabar daran.
Waa muhiim! Waa suurtogal in la ilaaliyo baradhada laga bilaabo Baalallay, doorbiday noocyo hore oo u bislaadaan dhaqdhaqaaqa siisay iyo dhicin.
Horumarinta sunta cayayaanka badan ee loogu talagalay tallaabooyinka ka hortagga, iyo sidoo kale la dagaallanka cayayaanka ee baradho.
Diyaargarowga bayoolojigu waxay wax ku oolaan meelaha barafka ee waaweyn: Entobacterin, Dendrobacillin, oo ku saleysan Bacillus thuringiensis. Methyl bromide, kaas oo lagu talinayo in lagu buufiyo dalagyada la soo goostay, ayaa sidoo kale si fiican u cadeeyay. Ha ilaawin beerashada awooda leh iyo daryeel dhamaystiran ee dhirta. First of dhan, digriiga caafimaad leh qoto dheer sida ugu macquulsan marka la beero, iyo duurka u si joogto ah u wejiga iyo spud. Sidoo kale, ma waxyeeleyso in lagu diiriyo walxaha beerto ilaa 40 darajo. Nidaamkan noocan ahi ma saameyn doono biqilka, laakiin wuxuu ka tirtirayaa dirxiga. Qaar ka mid ah mulkiilayaasha dagaalka ee ka soo horjeedka baalallaha baradho waxay ku kacaan dabin gaar ah, laakiin habkani wuxuu waxtar u leeyahay sariiraha yaryar oo leh infakshan yar. Iyadoo ujeedada ka hortagga ah, isku day inaad ku buufiso xalka beeritaanka heerkul ah 45 g halkii 5 l oo biyo ah.
Ma taqaanaa? Si loo joojiyo duullaanka baalalka adduunka, karantiilka waxaa laga soo saaray waddamo badan. Tusaale ahaan, Ukraine waxaa jira mamnuuc ah ee nasiibka baradho ah ee dhulka ee gobolka by ganacsatada gaarka loo leeyahay. Australiya, halkaasoo faafidda xayawaannada waxyeellada leh ay gaareen caleemaha, mid kasta oo la soo dhoofiyo waxaa la kariyaa oo lagu buufiyaa cayayaanka. Beeralayda Afrika waxay barteen inay isticmaalaan xeedhada gudaha si ay u ilaaliyaan cayayaanka.
Ka mid ah cayayaanka khatar u ah baradho, Medvedka maaha mid ka hooseysa booska hogaanka. Dadka cayayaanka ah waxaa badanaa la yiraahdaa "mole-cricket", taas oo lagu sharraxayo awooda ay u leedahay inay si deg deg ah u socoto meel dhulka hoostiisa ah, iyada oo faafinaysa dhawaaqyo gaar ah.
Cayayaanka waxay jecel yihiin in ay ku quudiyaan digriiga baradho, oo ku dhufanayaan godad weyn oo iyaga ka mid ah, kuwaas oo saameeya sprouts iyo dhalidda miraha. Intaa waxaa dheer, cayayaanku uma dulqaadan karo hooska gurigiisa, sababtoo ah taasi waxay inta badan burburisaa baadiyaha oo dhan. Sariiraha dadwaynaha weyn, cagaha ayaa gabi ahaanba burburin kara beeridda. Si loo ilaaliyo miraha, waxaan u baahanahay tallaabooyin dhamaystiran. Si aad u bilawdo beeralayda khibrad leh waxay kula talinayaan xaafad si fiican loo doortay baradho. Cayayaanka ma jecla marigolds. Sidaa darteed, waa in lagu beeraa inta u dhaxaysa safarka iyo wareegga wareegga goobta.
Dheeraad ah, duullaankii Medvedok joojiyo ukunta, shubay saliid. Inta lagu jiro cunitaanka hawo-mareenka cayayaanku waa la xiri doonaa lakabka saliidda, taas oo ay sabab u tahay dhimasho. Waxa kale oo aad samayn kartaa baako gaar ah oo ah qaybo siman oo ka mid ah qamadida, digirta iyo shaciir, ka shaqeynaya 25 g oo ah "Metaphos". Guud ahaan, isku dar ah hadhuudhku waa inuu miisaamaa nus kiilo.
Qaado shaah saliid ah gabbaldayaha ayaa lagu daraa waxaana la dhigaa meel u dhow beershanka usbuuca ka hor inta aan digriiga lagu beerin. Isku dar ah noocan oo kale ah ayaa kala firirsan inta u dhaxaysa safafka muddada soo baxaysa. Beddel ahaan, dabinka ka sameysan dhalooyinka dhalada ah ee soo galaya ciidda waa ku habboon yihiin. Beeraha qaar waa kala badh biirka.
Xilliga dayrta, cayayaanku wuxuu ku dhacaa godad yar yar. Xilliga jiilaalka, Medvedka ayaa xayawaanka ku qarinaysa diirimaadka, sidaas darteed bilawga ah cimilada qabow ee xasilloon, waxyaabaha ku jira fasaxyada ayaa ku faafaya dhammaan beerta, soo saarista dirxiga dhimashada qaarkood.
Waa muhiim! Medvedka waxay ka cabsi qabaa dhulka in la bacrimiyo digaag. Si taas loo sameeyo, waa ku filan inaad ku shubtid qayb ka mid ah wareega kasta oo leh qulqul qiyaas ah oo ah 2 kg oo ah digada iyo 10 litir oo biyo ah (ku dar walxaha biyo leh heerka 1: 5 ka hor isticmaalka).
Cayayaanka ma jecla ciidda qoyan, sidaas darteed kuma noolaan karto lakabka 20-centimeter ee mulch. Waxa kale oo aad ku xiri kartaa iyada oo caawinaadda tincture ee diirka basasha, kaas oo lagu waraabiyo beerta ka dib roobka. Habka, habkani sidoo kale wuxuu wax ku ool yahay sidii loola dagaallami lahaa cayayaanka kale ee baradhada. Qalabka kiimikada waxaa ka mid ah dhirta natiijada ku-meel-gaadhka ah "Medvetoksa." Waxay ku faafaan wareegga wareegga beeridda ee jeexjeexyada iyo si fiican u waraabiyey.
Sidoo kale kiisaska soo saaridda bukaanka, ku waraabinta qaybta xididka leh xal karbofos ah oo ah 50 g halkii 10 l oo biyo ah ayaa lagu talinayaa. Laakiin daaweynta noocaas ahi ma awoodaan inay xalliyaan dhibaatada hal mar iyo dhammaanba. Wax badan oo wax ku ool ah waxay ahaayeen hababka caanka ah ee lagula tacaalayo Medvedka.
Haddii aad aragtay caleemaha jaalaha ah ee jaalaha ah illaa 2.5 cm mudo dheer, waxaad isla markiiba bilowdaa inaad barafka ka ilaaliso wireworm. Haddii kale waxay lumayaan sariirta oo dhan, oo xididdada u rogaan isbuunyo dabacsan. Dadka qaar ayaa si qalad ah u maleynaya in kuwani yihiin qoryaha, oo iska indha-tiraya muuqaalkooda. Xaqiiqdu waxay tahay, dirxigaas waxaa soo saaray soo saaro lamid ah gujinta, iyo koorsada ay hawlaha muhiimka ah ku quudiyaan on digriiga, xididdada iyo jirridda dhirta. Ka dibna, dhaqdhaqaaqa tacliinta ah ayaa saameeya caabuqyada waxayna bilaabaan kalluumeysiga.
La dagaallanka cagaarshowga bataatada inta badan waxay ku dhacaan hababka kiimikada ama agrotechnical. Natiijada la rabo waa suurtogal marka la buufinayo beeraha cayayaanka, laakiin waxaa habboon in la ogaado in qaababka noocan oo kale ah ay ku dhaafi karaan walxaha sunta ah.
Natiijo ahaan, waxay si fiican u ilaaliyaan, laakiin waxay noqon doonaan kuwo aan ku haboonayn labada cayayaanka iyo dadka. Iyadoo lagu saleynayo caqiidooyinkaas, beeraley badani waxay u adeegsanayaan qaabab dhaqameed oo lagu ilaalinayo beergooyska.
Waa muhiim! Raaxo darro ah lamid ah gujisyada iyo dirxiga ayaa la abuuri karaa by liming carrada dhanaan.
Meelaha laga helo wirewinter wizewinter, waxay abuuraan xaalado aan fiicnayn. Gaar ahaan, waxay qodayaan sariir dhamaadkii Oktoobar, oo ay soo jiidayaan dirxiga xaasidnimada ah ee aagga raaxada. Si kasta oo loo dhigo loosening waxaa lagula talinayaa bilowga bisha June si loo burburiyo ukunta Nutcracker. Ultraviolet waxay saameyn xun ku yeelaneysaa iyaga. Muhiimada gaarka ah ee dagaalka waa joogitaanka qamadida beerta. Marka hore, warshadu waxay soo jiidaneysaa digriiga, taasoo adkaynaysa baradho si ay u koraan. Iyo labaad, waa cuntada la jecelyahay ee wireworm. Sidaa darteed, beerta sida cawska oo u shaqeeya sida geedka.
Seeding muhiim ma aha oo kaliya qadarka dalagga, laakiin sidoo kale loo eryo cayayaanka waxyeello leh. Xaaladaha cayayaanka noocan oo kale ah ee baradhada sida wireworms, dhirta beerto ka dib markii khudradda xididka noqon doonaa mid ku haboon. Intaa waxaa dheer, xalkan ayaa u oggolaanaya inuu ciidda ku quudiyo nitrogen.
Nematodes waxay ku quudiyaan digriiga iyo unugyada. Iyada oo ku xiran meesha ay ku yaalaan, cudurada asaasiga ah iyo xididdada ayaa kala duwan. Gormaashadan cabsida leh waa mid aan suurtogal ahayn in la dhaleeceeyo, maadaama noolasha dheddig-haweenka dhogorta lagu qiyaasay tobannaan sano.
Sanado badan, waxaad ku beeri kartaa baradho adigoon ogeyn jiritaanka cudurka.
Waxaa lagu muujiyey huruud ah caleenta hoose, oo ay la socoto afduubyada, istiraatiijiga weyn ee yar iyo maqnaanshaha ugxan. Dhibaatada yaryar ee aagga oo aan lahayn falanqayn gaar ah ee ciidda aan la qiyaasi karin.
Kaliya inta lagu jiro ururinta miraha on xididada ay duurka ay saameeyeen waa miro yar oo la arki karo macaan - kuwani waa fiix.
Waxay leeyihiin awooda dhaqdhaqaaqa xawaaraha sare, waxay ku dhacaan dhulka iyadoo ay joogaan, sidaas darteed, qof kasta oo qaba majarafad kaas oo bedeli kara nematodes meel cusub.
Cagaarka nematode baradku wuxuu isu muujiyaa oo keliya miraha dhibco miiran oo leh shinni shidaal ah. Iyaga ayaa maqaarka mararka qaar dhoobo iyo xajmiga ruptured si cad loo arki karo. Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee ay tahay mid aan suurtagal ahayn in la kala saaro baadiyaha jiran ee ka mid ah mid caafimaad qaba.
Ma taqaanaa? Faransiiska, baradho ayaa uqalmaamay caanaha Antoine-Auguste Parmentier, oo lagu qasbay in uu kufaraxo tabaha maskaxda si ay dadka deegaanka u noqdaan kuwo xiiseynaya xididdadiisa. Xilliga maalintaa wuxuu si taxadar leh u ilaaliyay beerihiisii ​​isagoo ka caawiyay mercenaries, habeenkiina ma jirin nafta. Dumarka ayaa kala jajabiyay degmada oo dhan, maxay tahay in ay samatabbixiso nin xushmaysan oo tuulada ka mid ah, taas oo keentay in uu wax xadaan.
Tilmaamaha ugu weyn ee fayraska microscopic waa caabbi u dhaxeeya dhaxan, abaar iyo cayayaanka. Dadka reer Yurub waxay barteen in ay la qabsadaan nematodes, oo ay u wareejiyaan khibradooda qof walba.
Beeraleydu waxay qodayaan godadka sumaysan iyo gubasho ama daboolo ciid ah oo biyo karkaraya leh. Dhamaan kabaha iyo isboortiga waxaa si taxadar leh loogu farsameeyaa qaabab.
Nematod baradhada baradhada ayaa sabab u ah infekshinka xididdada. Si arrintan looga fogaado, waxaa muhiim ah in la ilaaliyo tayada miraha, iyo dayrta si loo abaabulo goosashada haramaha, haray daaqsinka iyo beerta qoto dheer ee beerta. Shaybaarka cudurka qaba waxaa lagu gubay dushooda, dalagyada xididada haray ayaa si dhaqso ah looga dhaqay dhulka. Xitaa ka dib markii tallaabooyinka la qaaday mustaqbalka si ay u shaqeeyaan goobtii beeritaanka baradho waa aan loo baahnayn.
Waxa suurtagal ah in la fuliyo qorshooyinkaas oo kaliya saddex sano kadib, oo ku xiran hirgelinta hordhaca ah ee dhoobada ama dalagyada khudaarta meeshan.
Waxa kale oo wanaagsan in bacriminta beeraha baradhada la mariyo digaag, ku dar halka Hure ka hor beerashada meelaha cudurka qaba. Ujeedooyinka ka hortagga, waxaa suurtagal ah in la doorto noocyo badan oo adkaysi u leh baradho beerto.
Kuwani waa "Platinum", "Jukovsky Early", "Safo" iyo "Almaz". Waxyaabaha ay ka mid yihiin walxo gaar ah oo lagu soo saaro nidaamka xididka, oo laga reebo nematodes of awoodda ay ku quudiyaan. Marka la eego hababka kiimikada ah ee la dagaallanka cayayaanka, shirkadaha wax soo saarku waxay bixiyaan waxyaabo badan oo kala duwan. Trust waxay kasbatay daroogada "Nematicide", kaas oo dhowr toddobaad ka hor ka beerto beerista ciidda.
Laakiin weli, cayayaanka ayaa si weyn u lumaya marka la barbardhigo tabaha tiknoolojiyada habboon ee beeraha. Beeraleyda qibrada leh waxay aaminsan yihiin in burburinta dulin-biyoodka ay lagama maarmaan tahay in la ogaado hab-nololeedkooda.
Ma taqaanaa? Si uu u sumoobo baradhada, waa ku filan in la cuno hal caleenta cagaaran ama kilo ah caleemo cagaaran oo cagaaran, kuwaas oo ku jira cadaanyo tiro badan.
Shukumiyadu waa dhicin yar yar oo leh baalal madow iyo jaalaha ah oo leh madow iyo guduud mugdi ah. Rijeeradoodu waxay raadinayaan digirta baradhada barafka iyo dushooda, iyagoo sameeya marinnada unugyada.
Waxay ku daboolan yihiin xabo waqti ka dambeeya oo ay noqdaan kuwa diirada ku ah kobcinta jeermi-dilista. Cabbiraadda dibadda ah ee jirran ayaa u muuqda mid ciriiri ah, caleemaha ayaa la jarjarey, ayaa afkoda ay u nugul yihiin, meelo qalalan.
Hababka xakamaynta waxay ku xiran tahay marxaladda horumarinta cayayaanka. Tusaale ahaan, shakhsiyaadka qaangaarka ee baradhada baradho ayaa adkaata in ay ka soo baxaan beeraha by macnaheeda kiimikada, maxaa yeelay waxay yihiin kulan. Waxaa lagu qabtaa caawimo ah in la gooyo dhalooyin caag ah oo leh nectar qafiif ah ama macmacaan la jaray. Waxaad isticmaali kartaa tuubooyin kale oo la iibsado oo leh saldhig adag. Waa inaan jiri jirin haramaha beerta, gaar ahaan kuwa soo galey marxaladda ubax, iyo firileyda.
Cayayaanka noocan oo kale ah waxay ka fogaanayaan goobta si fiican loo bacrimiyo walxaha nitrogenous. Waxay ku filan tahay in la leexiyo dhibcaha digaaga iyo sariiro sariiro ah.
Gawaarida, sida cayayaanka khatarta leh, ayaa lagu burburiyaa sunta cayayaanka sida "Decis", "Tsimbush", "Prestige", "Nemabakt", "Basudin", "Zolon", oo ku rusheeyaa beerta xilliga ubax ee dalagga. Intaa waxaa dheer, habdhaqanka nidaamsan ee ciidda waa muhiim, taas oo ka qaybqaata burburinta tunnelka. Waxa suurtagal ah in lala tacaalo ardayga iyadoo la adeegsanaayo sariiraha qoto dheer ee qotada dheer. Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo tan dhamaadka Oktoobar, si loo xaqiijiyo dhimashada dammaanadda ee dulin.
Kuwa doonaya in ay ku badbaadaan sunta cayayaanka, beeralayda waxay bixiyaan habab caan ah oo la xidhiidha majarafadaha, taas oo ah in lagu diyaariyo gogol-xaar ah oo qadhaadh ah oo ah 1 kg 3 litir. Liquid daaqsinka ah dhowr jeer ka hor inta aanad ku duubnayn inta u dhaxaysa 1-2 toddobaad.
Waa muhiim! Maaraynta baradho leh kiimikooyin ayaa lagula talinayaa in aan ka badneyn laba jeer inta lagu jiro xilliga xagaaga. В противном случае пострадают корнеплоды.
Пожалуй, эти вредители являются самыми неприятными. И речь не только об их внешнем виде. Caleemaha caleenta waxay cunaan caleemo, iyagoo ka tagaya raad raac xoqan, iyo cuncun asalka ah ee xididada.
U muuqaalka muuqaalka bukaan-socodka waxay keeneysaa jawi qoyan oo qoyan iyo caws u eg. On baradho ah, waxay yihiin dhif ah, laakiin weli jecel yahay in la cuno on caleemo yar yar. Qaar badan ayaa xalliya dhibaatada adoo ku buufinaya duurka iyagoo leh xaley basbaas ah oo u dhiganta inta u dhaxaysa safafka lime, basbaaska madow ee madow, iyo sharooto qoyan oo qoyan. Tuubooyinka noocan oo kale ahi waa kuwo wax ku ool ah ilaa iyo inta dusha maadada walxaha qarsoodi ah ee suntu aysan wada joogin. Ka dib markaan dhibicda soo gaarin, si aad u gaarto weerarka ma'aha suurtagal. Waxaa intaa dheer, waxay muujinaysaa waxqabadka habeenkii.
Si looga hortago muuqaalka ka mid ah martida aan la socon ee beerta, si joogto ah weed iyo loosen ciidda. Isla mar ahaantaana aad burburin kartaa ukumaha iyo xaaladaha raaxo leh ee ay ku dhajiyaan.
Waxba ma yeelato si aad u ilaaliso aagga beerta leh qoyan gacmeed oo ku shub budada lime, ash alwaax ah, basbaas. Caqabadahan oo kale waxay ka baxsan tahay awoodda slugs. Under duurka oo aad ogeysiis raadis ah hawlaha muhiimka ah ee cayayaanka la soo sheegay, waxaad u baahan tahay inaad kala firdhiso cusbo potash. Saacad ka dib, ku celceli habka, sababtoo ah cayayaanku, oo doonaya inuu ka ilaaliyo xannuun ka dib markii uu taabtay kiimiko, wuxuu sii daayaa qadar badan oo xabeeb ah.
Haddii kale, isku day inaad ku seexato cadowga (macno ahaan) daawooyinka "Meta", "Duufaan".
Wixii milkiilayaasha kuwa doonaya in ay koraan badeeco bey'adeed oo jawaan leh, hababka dadku waxay soo jeedinayaan in la baabi'iyo slugs biyo kulul ilaa 40 darajo. Saamaynta kuleylka sidoo kale waa suurtogal ah marka uu daboolo inta u dhaxaysa safafka leh balaastiig. Laakiin hababkani waxay ku haboon yihiin oo kaliya haddii aad beeray baradho oo keliya 2-3 saf.
Ma taqaanaa? Dalagga ugu horreeya ee koray meel bannaan, waxay ahayd baradhada. Dhacdadan waxaa lagu diiwaan geliyay 1995.
Asaga oo ka mid ah aphids on baradho kuma xirna gaar ah ee ciidda, ama xaaladaha beerashada. Cayayaankaasi waxay keenaan waxyeelo khatar ah oo geedka, laakiin waxay halis u yihiin sababtoo ah waxay gudbiyaan caabuqyo kala duwan iyo jirooyinka. Sidaa darteed, ma aha la yaab leh in duurka u doortay by aphid ugu dhakhsaha badan bilaabaan inay xanuuno. Intaa waxaa dheer, cayayaanka ayaa saameyn xun ku leh walxaha beerto ee dalagyada xididka.
Beeraha baradho badanaa waxay saameeyaan shimbirta, caanaha, baradhada waaweyn, iyo xayawaanka xayawaanka ee buckthorn. Sannadka waxay soo saaraan ilaa 15 qarniyadood. Goobahooda waxay ka muuqdaan gudaha gudaha caleemaha. Wixii khasaare ah ee shakhsiyaadka garabka leh ee daroogada ah "Bi-58 New" waa mid aad waxtar u leh. Ujeedada tallaabooyinka ka hortagga ah, beeralayda si taxadar leh u nadiifi haraaga dushooda iyo miraha ka dib goosashada, caleenta waqti gaaban, oo ku dadaal inaad beerato digriiga sida ugu dhaqsaha badan.
Malaha qof kastaa wuu ogyahay raad-raacyada ka dambeeya dirxiga ee lamaanaha May. Cunto-qabteyn la'aantu waxay ku dhacdaa digriiga, cunidda cunnooyinka qoto dheer ee iyaga ku jira. Ka hor intaanu waa hawsha lagu kaydiyo tamarta mudo dheer oo arday ah.
Si aan u wadaagin beergooyska la abuuray, si taxadar leh u qodo sariirta xilliga dayrta iyo gu'ga, loosen carrada u dhexeeya safafka caleemaha ee soo muuqday.
Dhammaan arrimahan ayaa ka dhigaya shuruudaha horumarinta lamid ah. Laakiin natiijada kama dambaysta ah ee xakamaynta habraaca noocan oo kale ah kuma filna. Xilliga qaboobaha, dirxiga wuxuu ka qarin karaa barafka qoto dheer oo ka badan inta uu gaaro xayndaabka majarafad. Xitaa xayawaanku ma gaari karo qoto-dheer-mitir.
Sidaa darteed, waxaa lagugula talin lahaa in lagu beero cows ubucda dilka ah on goobta baradho sanadka soo socda. Xididdadiisa waxay leeyihiin saameyn sun ah on dirxiga ee kuwa lamid ah, iyo in ka badan waqtiga cuntada u horseedaa dhimasho.
Ma taqaanaa? Chips baradho ayaa waxaa abuuray by fursad American cook Cook George Crum ee 1853. Tani waxay dhacday sababtoo ah macaamiil madax-bannaan ee makhaayadda, oo ka cabatay qadhaadh aad u weyn oo french ah. In aargoosi, karisku wuxuu jaray khudradda xididka si aad u khafiifiya in taargooyadu u dhex maraan.
Intaa waxaa dheer kaftanka farsamada, waxaad ku daali kartaa hababka caanka ah ee la tacaalaya cayayaanka xaasidnimo. Waxaa ka mid ah, waraabiyo duurka u leh xal manganese ah (loo diyaariyey saamiga 5 g halkii 1 litir).
Adeegga wax ku oolka ah ee ku yaala goobtaada ayaa yeelan doona walxo ay ku quudiyaan Maybugs. Si aad ugu soo jiidatid ku filan si aad u xoqdo. Daawooyinka kiimikada waxaa fuliya cayayaanka diiwaangashan. Waxaa ka mid ah "Aktara", "Decis", "Sherpa", "Confidor", "Arrivo". Sidaa daraadeed qoob-ka-soociddu ma dhicin wax-soo-saarka beeraha iyo ma faragalinayaan horumarka buuxa ee sprouts, daaweeyo digriiga ka hor intaan la beeri lahayn Prestige.
Si loola dagaallamo cudurrada beertaada ama beertaada, waxaad isticmaali kartaa daawooyinka "Abiga-Peak", "Topaz", "Hom", "Titus", "Strobe".
Marka loo eego isticmaalka sunta cayayaanka, ha ilaawin inaad raacdo talooyinka iyo xeerarka amniga ee tilmaamaha ku lifaaqan. Waa suurtogal in la cuno baradhada lagu buufiyo suntan bil gudaheed, marka xeryahooda sunta ah ay burburaan.
Hadda waxaad taqaanaa kuwa dhibaateynaya baradhada sii kordhaya iyo sida loola tacaalo cayayaanka. Waxaan rajeyneynaa in talo-bixinteenu kuu noqon doonto mid wax ku ool ah si aad u abuurto xaalado wanaagsan oo ku saabsan qorshahaaga si aad u ururiso dalagyada wanaagsan.